Kuweyt - ALinks
Sidee shaqo looga helaa Kuweyt? Tilmaam deg deg ah oo loogu talagalay ajaanibta iyo kuwait
Waxaa laga yaabaa 17, 2021 Maitri Jha shaqo, Kuwait
Kuweyt waxaa si rasmi ah loogu magacaabaa Gobolka Kuweyt. In kabadan 70% dadkeedu waa muwaadiniin ajnabi ah. Marka, waddankan ku yaal Bariga Dhexe wuxuu noqon karaa meel ku habboon ajaanibta inay shaqeeyaan. Waa meel ku habboon in laga shaqeeyo iyo